Baahirdaaritti dubartiin haaloo bahuuf jecha qondaala mootummaaatti asiidii naqxe - BBC News Afaan Oromoo
Baahirdaaritti dubartiin haaloo bahuuf jecha qondaala mootummaaatti asiidii naqxe
Naannoo Amaaraa magaalaa Baahirdaaritti dubartiin tokko hogganaa mootummaa tokko irratti dhangala'aa asidii dhangalaasuun miidhaa akka irraan geessiste poolisiin BBC'tti hime.
Qondaalli mootummaa asiidiin itti nam'e Biiroo Geejjiba Naannoo Amaaraatti Daarektara bobbaasa kan ta'ani Obbo Dammallaash Sinnishaawidha.
Dubartiin badii kanaan shakkamaniifi komii akka qaban himan Hagayya 02/2011 ganama qondaala mootummaa kana argachuu akka fedhan himanuis walgahiirra akka jiran itti himamee deebi'ani.
Ta'us, gaafasumas waaree booda deebi'un gara waajjirichaa akka dhufan miseensi abbaa adeemsa qorannoo buufata poolisii 3ffaa Baahirdaar Inispeektara Itti -aanaa Yismaaw Taarikuu BBC'ti himaniiru.
Dubartiin kuni bara 2008 karaa seera hordofeen waldaa ''Iffooyitaa'' jedhurraa baajaajii akka bitan, kanaanis yeroo muraasaaf baajaajiin isaaniis hojjetaa ture.
Inispeektar Yismaaw itti dabalanii ''boodarra sababa dubartiin kuni hin beeku jedhaniin barjaan waldaa sanaa ka'e, bajaajiinis akka to'atamu taate,'' jedhu.
Ergasiis dubartattiin ''baajaajii waldaa sirrii ta'erraa akka bitan eeruun iyyannaa galchan. Boodarra barjaa hambisanii baajaajii naaf deebisani,'' jechuun poolisiitti himaniiru.
Itti dabalanis baajaajiin kuni kan kan Aanaati akka jedhan himu,
Itti fufees baatii Amajjii keessa baajaajiin to'annoo jala oolte deebi'u waan dhabdef waajjiraalee gara garaatti iyyannaa galfatanis deebii akka dhaban ibsameera.
'Gaafa badii raawwatan'
Dubartiin kuni kuni akka ta'u kan taasise kana dura hogganaa waajjira Geejjiiba magaalaa Baahirdaar kan turaniifi kan yeroo ammaa Biiroo Geejjibaa naannichaatti kan hojjetan Obbo Dammallaash Sinnishaawa akka ta'an yaaduu isaanii Poolisiin himeera.
'Namni Caaltuu gudeeduun shakkame himannaan irratti hinbanamne'
Sababa kanaan, dubartiin kun ''namicha balleessuuf kaka'e'' jechuu isaanii Inispeektarri Itti - aanaa Yismaaw himu.
Badii kanaan kan shakkaman dubartiin kuni Hagayya bultii 2/2011 asiidii bitanii ganama keessa gara waajjira Obbo Dammallaash deemanis walgahiirra jiru waan jedhamanif waan qabatan sana fuudhanii manatti galan.
Waaree booda yeroo deebi'an garuu waajjiratti isaan argan. Achii dubartiin kuni asiidii jookiitiin fuudhanii fidan namicha irratti naqanii waan ta'e of duuba osoo hin ilaaliin fiiganii baduu isaanii poolisiitti himaniiru.
Haa ta'u malee, osoo hin miliqiin tumsa namoota naannoo sana turaniin to'annoo jala kan oolan yoo ta'u qondaalli mootummaa sunimmoo mana yaalaa akka seenan ta'e.
Namicha dhadacharratti asiidii ofitti dhangalaase
Asiidiin irratti dhangala'e qaama isaanii irratti waan hin buunef baay'ee akka hin miidhamne himameera.
Ta'us, harki isaanii gurraacha'uu, dhiita'u, garaa isaanii irratti mallattoon gurraacha'u akkasumas fuulli isaanii gubateera.
Shakkamtuun konkolaataaf jettee asiidicha akka bitte poolisiif kan himte yoo ta'u poolisiinis madda asiidii kanaa qorachaa akka jiru himeera.
Obbo Dammalalaash yaada poolisiif kennanin addatti ishee miidhuuf akka hin hojjenne akkasumas seera kabachiisuuf kaanis akka dhorkaman himaniiru.
Poolisiin ragaa walitti qabee akka dafee ilaalamuu galmee gara waajjira haqaa Magalaa Baahirdaaritti erguu hime.
Qondaala mootummaa miidhaman dubbisuuf BBC'n yaalii taasisuus dhimma isaanii poolisii waliin dursa akka xumuran himan.
Obbo Dammallaash Sinishaaw wal'aansa mana yaalaatti taasisan xumuranii manatti galuu isaanii odeeffanneerra.